उपत्यकामा थप १० दिन निषेधाज्ञा– के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? (सूचनासहित) – Halkhabar kura
३१ असार २०७८, बिहीबार १७:३४
उपत्यकामा थप १० दिन निषेधाज्ञा– के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? (सूचनासहित)
काठमाडौं उपत्यकामा १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ। बिहीबार बसेको उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले साउन १० गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको हो।
हाल सञ्चालनमा रहेका सबै पसलहरु साँझ ७ बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीका अनुसार लामो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले यसअघि नै लामो दूरीको यातायात चलाउने प्रस्ताव कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा पठाइसकेको र बिहीबार सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको जानकारी आएको उनले बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेको र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पास लिएर आउने गाडी उपत्यका प्रवेश गरिरहेको सिडिओ पराजुलीले बताए। कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौं उपत्यकामा पटकपटक निषेधाज्ञा थप गरिँदै आइएको छ।
Previous साउनदेखि यस्ता मोबाइलहरु बन्द हुँदै, आइएमइआई दर्ता अनिवार्य
Next अब काठमाडौं प्रवेश गर्नेलाई पास चाहिन्छ कि चाहिदैन ?